बार्षिकोत्सवको अवसरमा सुबिसुको अफरै अफर ! - Everest Dainik - News from Nepal
बार्षिकोत्सवको अवसरमा सुबिसुको अफरै अफर !
काठमाडौंः केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी, सुबिसु केबलनेट प्रा.लि.ले आफ्नो १९औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा ‘सुबिसु अफरच्यूनिटी’ योजना ल्याएको छ ।
जसअन्तर्गत एक हजार ४० रुपैयाँमा प्रति महिनामा २५ एमबीपीएस इन्टरनेट र फूल एच डि प्याकेज (२७५ भन्दा बढि च्यानल, ९५ भन्दा बढि एच डि च्यानल) प्राप्त गर्न सकिनेछ । यो १५ महिनाको भुक्तानिमा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै क्लिर टिभी प्याकेज (२४५ भन्दा बढि च्यानल, ६५ भन्दा बढि एच डि च्यानल) मात्र रु २२१ मा प्राप्त हुनेछ । यो १४ महिनाको भुक्तानिमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका साथै ग्राहकहरुले दामी म्युजिकको प्रिमियर प्याकेज ३ महिनाका लागि सित्तैमा प्राप्त गनेुहुनेछ जसमा २० हजार भन्दा बढी नेपाली गीतहरु समावेश छन् ।
आफ्नो १९औं बार्षिकोत्सवका साथ ग्राहकहरु माझ खुशी साटासाट गर्ने उद्धेश्यका यो अफर ल्याइएको सुबिसुले जनाएको छ । अफर सिमित अवधिका लागी मात्र लागू हुने रसर्त तथा नियमहरु लागू हुने बताइएको छ ।
सुबिसु केबलनेट (प्रा.) लि.ले केबल तथा डिजिटल टिभी सेवा, कन्जुमर इन्टरनेट, इन्टरप्राइज इन्टरनेट, एम.पि.एल.एस भि.पि.एन.एस, व्यानएथर्नेट, होलसेल आइ.पि ट्रान्जिट, एम.भि.पि, डाटा सेन्टर सोलुसनजस्ता मनोरञ्जनात्मक सेवा तथा बिजनेस सोलुसन प्रदान गर्दै आएको छ ।
ट्याग्स: ‘सुबिसु अफरच्यूनिटी’, १९औं बार्षिकोत्सव, सुबिसु केबलनेट प्रा.लि.ले